DHAGEYSO:Madaxweyne Gaas oo safar aan horay loo shaacin ku tagay magaalada Gaalkacyo. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Madaxweyne Gaas oo safar aan horay loo shaacin ku tagay magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha uu xilkiisu sii dhamaanayo ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta safar aan horay loo sii shaacin wuxuu ku tagay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Wararka ayaa sheegaya in booqashada Madaxweynaha Puntland aysan ka warqabin Waxgaradka iyo Bulshada Gaalkacyo, waxaana la sheegay in gudaha Madaxtooyadda Gaalkacyo uu hada kula shirsan yahay qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada amaanka ee gobolkaasi ku sugan.
Safarka deg deg ah ee madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ku soo aadday xilli la filayo galinka dambe ee maanta in la shaaciyo xubnaha ka mid noqonaya Baarlamaanka cusub ee maamulkaasi,iyadoo dhaqdhaqaaq arrintaan la xiriirta laga dareemayo magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Cabdiweli Gaas, oo ka mid ah musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Puntlan ayaa sidoo kale culeys badan kala kulmaya qaar ka mid musharraxiina u tartamaya xilka madaxweynaha maamulkaasi, kuwaas oo horey u sheegay inay dadaal ku bixin doonan sidii uu isbeddel uga dhici lahaa deegaanada maamulka Puntland.
Waxaa hada magaalada Garowe ka socda qaban qaabadii ugu danbaysay ee loogu dhawaaqayo 66-da xubnood ee ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee maamulkaasi.
Ammaanka magaalada Garowe ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana halkaasi ku sugan ciidamada Ammaanka maamulka Puntland oo ilaalinaya dhamaan dhaqdhaqaaqyada magaalada Garowe.
Marka xildhibaanada lagu dhawaaqo waxaa lagu wadaa inay yeeshaan kulankoodii ugu horeeyay siyaasiin hore oo Puntland ka soo shaqeeyay ayaana xildhibaanada cusub ugu baaqay inay cadaalad ku doortaan hogaanka maamulkaas.
← Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ka baxay xisbi uu ka mid ahaa.
Madaxweynihii hore ee dalka Moi oo ku baaqay in laga shaqeeyo nabadda dalka →